MA WAXA AAD KA XUNTAHAY MEEQAAMKA SOMALILAND? – hogaanka.org
GTV OO FALANQEEYEY SOCDAALKII MADAXWEYNE BIXI EE DJABUUTI IYO WARAR KALE
Inankan aan adeerka u ahay ee clip kan kore inala wadaagey waxaa jecelahay in aan si kale wax u tuso,kanina waa rayigeyga iyo waayo aragnimadeyda guud.
Farmaajo dagaalka uu Somaliland ku bilaabay iyo sidii uu la rabey waxaa ka badbaadiyey Allah(swt) , Sidoo kale Farmaajo ujeedadiisu uu ula saaxiibey labada dal ee Eriteriya iyo Itoobiya waa sidii uu u noqon lahaa kelitaye aan gacantiisa ka bixin xukunka muqdisho iyo guud ahaan Somaliyadii midowdey 1960kii.
Somaliland Cadaw kuma aha Geele,sidoo kale Geele Somaliya Cadow kamu aha balse Farmaajo waxaa u muuqda kursiga wuxuuna aminsan yahay in uu somalida isku dubaridankaro sidii adeerkiina wuxuu qori iyo lacag loogu talin karo.
Dadka Siyaasada geeska Afrika falanqeeyaa waxay aaminsan yihiin Somaliyi cadow Farmaajo aan ahayn malaha,waayo hadimooyinka uu afartii sanadood ee uu xukunka Somaliya hayey dhibta uu u geystey sumcada Somaliya,dhibaatooyinka uu ka geystey koley ma aha kuwo umada Somaliyeed ilowidoonto Allah swt waxba kama qarsoona.
Hadaba Somalidu waxay ku maahmaahdaa: QOSOLNA HIIL WAA GALAA.
Hadii aad Muse neceb tahay Muuse waa tegi Balse Somaliland Somalilander ka ayaa leh.
Shaqsi waxaa mudnaanta ka siinaynaa Qaranka Somaliland oo horumara, Shaqsi nacayba waa in aynu ka horumarinaa in aynu dalkeena Ilaashano dagaalkana horeba waxaa u bilaabey farmaajo balse imika isaga ayey isla rogtey Allah uun baa og halkuu ku dambeyn doono balse hada Somalidii iyo caalamkiiba way og yihiin Farmaajo wuxuu yahay inta dambana taariikhda ayaa sheegi.
HAMBALYO MEHER (AXMED IYO UGBAAD) Previous
GTV OO FALANQEEYEY SOCDAALKII MADAXWEYNE BIXI EE DJABUUTI IYO WARAR KALE Next